अक्षय र ट्विंकलद्वारा एक सय 'अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर' सहयोग :: Setopati
एजेन्सी मुम्बई, बैशाख १५
कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएपछि भारतको सार्वजनिक जीवन नाजुक बनेको छ। दैनिक तीन लाखभन्दा बढी संक्रमित थपिइरहेका छन्, स्वास्थ्य संस्थामा बेड, अक्सिजन सिलिन्डर र औषधिजस्ता अत्यावश्यक कुराको अभाव देखिएको छ।
यस्तो संकटमा सहयोग गर्न अग्रसर हुनेको पनि कमी भने छैन। अन्य क्षेत्रका मानिसजस्तै धेरै भारतीय सेलिब्रेटीहरुले पनि कोरोनासँग जुध्न अग्रसरता लिएको खबर भारतीय सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन्।
कलाकारहरुको भीडमा बलिउड अभिनेता अक्षय कुमार र लेखक तथा अभिनेत्री ट्विंकल खन्नाले सय वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स सहयोग गर्ने खबर बलिउड हंगामाले छापेको छ। अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरले हावाबाट नाइट्रोजन फिल्टर गरेर अक्सिजन छान्ने काम गर्छ।
यसै सन्दर्भमा ट्विंकलले सामाजिक सञ्जालमा मंगलबार लेखेकी छन्, 'एकदमै सुखद खबर- लन्डनका एलिट हेल्थ दैविक फाउन्डेसनका दुई जना डाक्टरले १२० वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स प्रदान गर्ने भएका छन्। यसमा अक्षय कुमार र मैले थप सय वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स थपेर सहायताको हात बढाउने निर्णय लिएका छौं। यसपछि हामीसँग २२० अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स उपलब्ध हुनेछ। तपाईंहरुको अग्रसरताका लागि धन्यवाद। हामी सबैले आफूले सकेको गरौं।'
ट्विंकलले आफ्नो इन्स्टाग्राम क्याप्सनमा सकारात्मक हुँदै लेखेकी छन्, 'मलाई लाग्छ गत केही हप्तादेखि मेरो आफ्नै परिवारका केही सदस्य बिरामी भएकोले म अलि निराश थिएँ। तर म लामो समय त्यसरी बस्न सकिनँ। म तपाईंहरुलाई मनैदेखि आग्रह गर्छु आफ्नै तरिकाले जे जसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुस् ताकि यो अन्धकार क्षणलाई फर्केर हेर्दा खराब अवस्थामा पनि हामीभित्रको सबैभन्दा सशक्त पक्ष देखियोस्।'
उनले सबै एकजुट हुँदा संकटसँग जुध्न सकिने र चाँडै राम्रो अवस्था पक्कै आउने आशा पनि व्यक्त गरेकी छन्। यसअघि ट्विंकलले एक सय वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स भरोसायोग्य गैरसरकारी निकायबारे जानकारी माग्दै ट्विट गरेकी थिइन्।
भारतमा अक्सिजनको अभावले बिरामीको उपचारमा समस्या भइरहेको समयमा अक्षय र ट्विंकलको यो कदमको सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा भइरहेको छ।
यसअघि अक्षय कुमारले पूर्वक्रिकेटर गौतम गंभीरको गरिब गुरुवालाई खाना बन्दोबस्त गर्ने संस्थालाई एक करोड भारु सहयोग गरेका थिए।
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख १५, २०७८, १२:३५:००
लमजुङमा भूकम्प: चार जना घाइते, घरहरू भत्किए
सेरमले भन्यो- यो वर्षको अन्तिमबाट अरू देशलाई खोप दिन सकिन्छ कि
नेपालमा ताउ-ते आँधीको प्रभाव: केही स्थानमा भारी वर्षा र हिमपात हुने
इन्टरनेटमा विलासी वस्तुसरहको कर हटाए सस्तो पर्छः विनय बोहरा
राष्ट्रिय सभामा चुनाव जित्न यसकारण कठिन छ बादललाई
प्रधानमन्त्री निरंकुश भए, अदालत उनकै छाया, प्रतिपक्षी दल मुकदर्शक! (भिडिओ)
उपत्यकाका यी चार ठूला अस्पताल भन्छन्- कोरोना संक्रमितलाई उपचार नगरी गेटबाटै फर्काउँदैनौं
नेपालले बादललाई भने- खिमलाललाई असहयोग गरें भने, मभन्दा रद्दी मान्छे कोही हुँदैन
इन्टरनेटमा लिक भयो सलमानको 'राधे', प्रहरीमा उजुरी
इन्स्टाग्रामले गर्‍याे कंगनाको पोस्ट डिलिट
प्रधानमन्त्री निरंकुश भए, अदालत उनकै छाया, प्रतिपक्षी दल मुकदर्शक! (भिडिओ) राधेश्याम अधिकारी
इमान्दार नेता मात्रै हुने कि नागरिक पनि! बच्चु कैलाश कैनी
हजुरआमाको कुरो मिलन पौडेल
खाडी र युरोप जाने नेपालीको मन एउटै हुनुपर्ने होइन र? कान्ति न्यौपाने
जिम्मेवारीबाट भाग्न सक्दिनँ आमा! सकिला चौलागाईं
सुरक्षित बस्न जरुरी छ सन्तोष खड्का
प्रेम अर्थात् प्रेमिका निर्जला अधिकारी
हजुरलाई बधाई छ! सौगात आचार्य
त्रासद समय मुक्ति गौतम
बाठो सुगा रूबस पराजुली
विविधताको दृष्टिकोणमा नेपाल रोमहर्षण ढुंगेल
नेपाली हुनुमा गर्व छ शुशभ भण्डारी
कि परीक्षा सुनिश्चित गर्दिनू कि भविष्य! विपीन सुवेदी